Indonesia in Focus: Furiinka iyo xaasas badan.
Furiinka iyo xaasas badan.
Kortaan ayaa waxaa ma uusan dhammayn (322)
(Qaybta saddex boqol laba iyo labaatan), Depok, West Java, Indonesia, 26 July 2015, 16:07 pm)
Asal ahaan waxaa dhib ku noqon lahaa qof dumar ah in ay aqbasho xaqiiqada ah in ninkeeda guursan doono mar ama naagtii labaad (xaasas) ama ninkeeda afaaro (shukaansiga ama galmo la haween kale nafteeda ka sokow.
Inta badan haweenka marka helay ninkeeda wuxuu qabay naag kale, sidoo kale ay rimay (guursaday) si rasmi ah ee Arrimaha Diinta Xafiiska (KUA) iyo xaas (fasaqo) si qarsoodi ah (taxane weheshiga, sharciga waafaqsan isku guursaday sida ay sharciyada diinta / laakiin lama duubo ee xafiiska KUA).
Haweenkooda intooda badan isla markiiba dalbadeen furriin (separation), labada af ahaan iyo sharciga (maxkamad).
In Indonesia, haweenka ee tuulada (kampung) sida caadiga ah aqbalnaa xaalada jirta ee hadda jira, waxa ay ka dhigan tahay sida caadiga ah iska casilay si uu xaalada sameeyey xaasas badan, sida caadiga ah, maxaa yeelay haweenka ee tuulada aan dhaqaale ahaan xor ah oo heer sare ah ku tiirsan tahay ninkeeda ku nool kharashka guriga jikada iyo kharashyada kale ( dugsiga / waxbarashada) loogu talagalay carruurta.
Inkastoo magaalooyinka haweenka sida caadiga ah dhaqaale ahaan xor ah sidaas darteed wax badan oo ka gudbiyay furiin ninkeeda uga samaynayey xaasas.
Xitaa waxaa jira qaar ka mid ah kuwa ha ninkeeda sii xaasas badan, oo weli furiinka ma samayn, sida caadiga ah ee la tixgelinayo ee dhammaan kharashka waxbarashada (dugsiyada) ayaa weli ninkeeda ku tiirsan.
In kasta oo ay laba weli waa mid ka mid guriga, xaaskiisa ku noolaa dabaqa labaad, ninkeeda qeybta hoose (sariiro gaar ah) seexday, taasoo la micno ah in in kasta oo ka baxsan guriga labada lamaane ayaa weli u muuqda isku-habboonaanta, laakiin in guriga uu dhab ahaantii noolyahay sida She'ool, mar walba dagaalamaan aan dhamaadka saldhigga.
Sidaas darteed nolosha dhabta ah sida nolosha dacayadeed-ku faraxsan ka kooban. In la eego diinta dhabta ah labada kaliya Ibliiska xidhnayn si ay u sii wadaan inay sinaysato (dembiga).
Mar dambe diyaar u ah inay u adeegaan ninkeeda (sex) ku dembaabtaan oo ninkeeda, sababtoo ah ninkeedu weli waa ansax ah si ay ninkeeda, oo ay ninkeeda xaasaska isku aan caddaalad ahayn ayaa sidoo kale dembiga.
Ilaa Nabiga in hadalkii ka digtay in ninkeeda oo aanu garta ma uu samayn si ay naagtiisii ​​u Maalinta Qiyaame ordi doonaa sida stroke (oo socda annaan).
Eebe Quraanka aanu noo oggolaanaysaa in aan guursado (guursaday) ugu badnaan afar haween ah, laakiin haddii aan ka cabsan aan caddaalad samayn karo, ka dibna mid ka mid ah oo kaliya qof dumar kawinlah isku mid ah (monogamy) (Al Quraanka Surah An Nisa aayadda 4)
Nabiga naftiisa sameeyey xaasas badan ka dib markii xaaskiisa hore (Khadija) dhintay, isaga, xaaskiisa iyo xataa markaas ahayn Aiyah, kuwa carmallada dagaalka (dagaalyahanada), waxaa jiray in ka badan 60 sano jir, halka Nabiga marka ay weli ahayd 50 sano jir.
Sidaas Nabi Muxammed sababtoo ah waajibaad diineed, xaasaska oo keliya ma ay faraha la galmo damaca.
Ka dib oo dhan Prophets oo la isku hallayn karo Rasuulladii (Ilaahay dembi), had iyo jeer si cadaalad loo sameeyo wuxuu naagihiisii.
Haddaba nimankii waa sababta oo ah ma nihin isku hallayn karo, sidaa daraadeed ka fikir laba jeer ka hor inta uusan go'aansan inuu xaasas.
Sababaha Divorce iyo talooyin ku rajayn.
Sheekh Dr. Muhammad Nasir Al Humaid
Ma wax waa mid aad u naxdinta leh, tirada xaaladaha furiinka ee dunida Islaamka ay sabab u tahay waxyaabo kala duwan, taas oo run ahaantii la filayey karo. In kasta oo saameynta ugu badan ee walaaca ee bulshada; shaqsi ahaan ama kooxo. Ma waxa uu noqon doono in si xal loogu arrimahan khasnadaha Shareecada Islaamka taas oo uu leeyahay adayga iyo kaamil ah helo?
Article Kanu waa shuqulkii ah aqoonyahan magacaabay Dr. Muhammad Nasir Al Humaid. Waxa uu yahay mid ka mid ah macalimiinta ee Jami'ah Islamiyah Al Madiino. Qoraalka muujineysa ee bulshada ka mid ah dunida Islaamka ayaa hadda fog semankin ka tilmaamaha oo ka mid ah Quraanka iyo Sunnaha. Sidaas darteed waxaa ka mid ah, isku day in la abuuro Shareecada bulshada Islaamka ah waa wanaagsan oo ku qumman la dhar ah ee guurka waxay bilaabeen inay HAKAD leh tirada xaaladaha furiinka.
In warqadda, waxa uu xusay dhowr qodob oo muhiim ah oo keeni furiinka. Inta badan oo ka mid ah sababaha keena waxa ka mid ah, in la filayey karo oo xal lahayn. Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah oo aan wax kale oo kale, marka laga reebo furiinka.
Wuxuu kala jebiyey sababtoo ah furiinka this saddex qaybood. Marka hore, tan iyo dhalashada furiinka ninkeeda ee. Marka labaad, tan iyo furiinka dhalashada ka naagtii. Saddexaad, sababtoo ah furriinka waxaa keena labada qoysaska guursaday lamaane.
Furiin ka timaada ninkeeda iyo xalal
First: Sayga aan buuxin waajibaadka soo rogay ka raaedo Ilaah fahmo inay naag u noqoto, waxaa sabab u ah arrimo Jaahiliin (ha garto), dayacina, ama sababta oo ah si ula kac ah ugu soo horjeeda Shareecada Islaamka Eebe.
Si habboon, ninkeeda ka bartaan inay ogaato oo ku saabsan xuquuqda xaaskiisa. Ma bumble waa caadi, oo ha ka Dhawrsada Eebe ee la xidhiidhinaa. sidaasuu, waxaa la filayaa in ay sanduuqii guriga wada sii Doontaa waarta taladoodu hoos Shareecada Islaamka sharaf leh. Waxaa ka mid ah xuquuqda naag ka dhanka ah ninkeeda, ninku si ay naagtiisii ​​u si fiican ula dhaqmaan, isaga oo siinaya nool, sharaf, sujuuda-jilicsan, waxay aqoonsan tahay ayaa haddana ceebaha xaaskiisa, oo lagu qurxiyey isaga ka soo hor.
Ibn 'Abbaas anhu yiri, "Waxaan aad ugu faraxsanahay oo ku dadaalaan si ay u sameeyaan ilaa hore ee naagtayda, sida waxaan noqon doonaa ku faraxsanahay haddii uu kor u labbisto ii, maxaa yeelay, Ilaah wuxuu yidhi,
Iyaga (Haweenka) ee waa xuquuqda ay waa inuu rumoobo (nimankooda), sida ay leeyihiin xuquuq in waa inuu rumoobo ninkeeda. [Al-Baqarah: 228]. 
Labaad: Ha adeecaynaa amarka Nabiga sallallaahu 'wa, (tusaale ahaan) si ay u guursadaan qof dumar ah oo diinta cibaadaysan buu ahaa, sidii uu ku hadlaysaan,
Haweenka guursaday afar wax, tan iyo markii uu hantida, faraciisii, qurux, iyo diinta; waswaasiye ka diimeed. 
Marka mid ka mid ah laba yihiin diinta, halka qaar kalena hana, adeecin, waxaa hubaal dhici doona duufaan kala duwan ah ka dhexeeya labada. Cibaadaysan A samayn doonaa wax walba oo Ilaah ka raalli noqdo, halka xaaskiisa oo aan ahayn addeeciddooda aawadeed, oo ah waxa ay hubaal raaxeysan doonaan hawadiisa.
Ma habboon tahay, Nin ku soo jiito lahaa haweenka u fiirsada fariin Nabiga sallallaahu 'wa kor ku xusan, si aad u hesho labo yihiin oo dheer -although diinta waa in ay sugaan ilaa ay naagtu ku heli lahayd. By guursadaan haweenka diinta, nimankooda shaki awoodi doonaan in ay markab guriga u dhoofay iyadoo ka buuxda ugu faraxsanahay, idamka Eebe dabcan.
Ninkeeda A ayaa xil weyn inuu wax ku wacdiyo oo uu guursadaa iyada iyo talinayaa samir, oo xigmad leh oo idiin roon. AllahSubhanahu wa Ta'alal yiri,
Markaasuu ku amri far ehelkaaga salaadda kuna samir korkeeda ka badan. [Taha: 132].
Markaasay u yeeri dadka gasho jidadka Eebahaa si xigmada iyo Wacdi fiicana kulana, iyo iyaga oo ku doodaya in sida ugu wanaagsan ee. [An-Nahl: 125].
Sidaas darteed, naagtii ayaa la filayaa in ay awoodaan si fiican u la idanka Eebe u noqon.
Saddexaad: Xaaladaha meel ka baxsan jawiga diinta qoysaska iyo Ilaahaaga ahna addeeci mayno, gaar ahaan haddii ay guriga ku jira siyaalaha kala duwan in dhaawac, sida warbaahinta telefishinka, majaladaha ama CD in wiiqi aasaaska anshaxa.
Ma habboon tahay, in guriga Mu'min ah oo had iyo jeer akhri Quraanka, Surat Al Baqara-gaar ah oo uu leeyahay eegidda. Nabiga sallallaahu 'wa.
Waa in aadan gurigaaga ka dhiga u eg xabaalo oo kale, dhab Ibliisku-Ibliisku ordi doonaan meel ka baxsan guryaha la akhriyey waxay al-Baqara Surat. 
Sidaas darteed waxaa cad, in guriga marna akhriyo Quraanka, xitaa waxaa ka buuxsamay sinaysta Yeedha Cadho Eebe, (guriga) waa jeclaan doonaa shaydaan-shaydaan yahay. Ugu dambeyntii, xasilloonida iyo dagganaashiyo libdhay, taasoo keentay in luluhnya mahligai qoysaska burburiyey ayaa kobciya.
Miyayse ku habboon tahay, lamaane isku dayaya in ay guriga ku hay si aan loo Ibliisku-Ibliisku galaan, sida inay u dhawraan ka tuugo soo galay. Labada leeyihiin in ay naftooda ku saabsan yihiin waxyaabo ay muhiim tahay in dunida iyo nolosha dabadeed, halkii ay gelgelinta mashquul ku sinaysta inay baabbi'iyaan. Jiidaan guriga la dhikrullah, warbaahinta ama murti Quraanka. Taasi waa sida ugu fiican ee saaxiibada guriga. Ayaa sheegay in Eebe.
Xusuusnow la dhikr inay Ilaah, xasishaa Quluubtu. [Ar Ra'du: 28].
Mu'min ah oo u dhaqmo ma lagu siri karaa, haddii aad aragto qoysaska gelgelinta caasinnimada buuxa iyo munkar, laakiin sida haddii labada lamaane (kuwii) ee ku nool wada noolaanshaha iyo nabada oo aan muran kasta. In xadiis Qisadii by Ibn Mascuud Radi 'anhu, Nabiga sallallaahu' wa yiri,
Dhab ahaan yaa Eebe Ilaaha Qaadirka ah adduunka siin Nicmo in dadka oo jeclaaday oo neceb yahay; laakiinse isagu ma uu siin doonaa Nicmada Diinta, marka laga reebo in dadkiisa la jecel yahay oo keliya. 
Ilaah si ula kac ah siiyey sugay kuwii soo maleegay caasinimada, sida hadalkiisa,
Ha dagin gaalo fal dhulka. Illeen waa ahaanshaha daqiiqad, ka dibna waxay la gelin doono Jahannamo. Taasi waa meel xun. [Al Imran: 196-197].
Oo isla markii eraygaasu,
Kuwa Beeniyey Aayaadkanaga, waxaana ku siin doona wixii joogsadeen, oo aan ogayn. markaas waxaan iyaga siin doonaa markii ugu wacan. Indeed, awoodaha hokey aan aad ayay u xoogan. [Al A'raf: 182-183].
Nabiga sallallaahu 'wa yiri,
Indeed, Ilaah ula kac ah laasho (rigoore) ka hor zhalim ah, marka ay timaado in uu waqti, Ilaah wuxuu isaga ku ciqaabi doonaa iyada oo aan mar kale la siiyo fursad. 
Dadka doonaya in ay lacag bixisid si aad guryaha, taas oo caasinimada buuxda, heli doonaa, in ay ku nool yihiin nabad weligiis dareenka. Dhab ahaantii dad badan oo ka mid ah kuwa ku nool lama filaan ah iyo walwalka. Hadalka Eebe Jannatul,
Qof kasta oo dunida ku doonayo, ka dibna waxaan ku siin doonaa in qof kasta oo waxaannu doonaynaa. [Al-Isra: 18].
Waa wax iska cad, in aan dhammaan dadka doonaya adduunka ahaanshaha waxay heli doonaan.
Tan afraad, ninkeeda ayaa aan ahayn bukaanka. Waxaa macquul ah, arin taasi dhacdo sababo la xiriira dayacaad, ama jaahilnimada qof aasaasiga ah iyo dabeecadda Ilaah wuxuu abuuray dumar. Haweenay laga abuuray feeraha qalloocan, sidii erayadii Nabiga sallallaahu 'wa.
Wanaagsan in associate dumar Waxaad samayn. Indeed, ay ka abuuray feeraha. Dhab ahaan, feeraha ugu qalloocan waa ugu badan sareysa. Haddii aad isku dayayaan in ay toosi, markaas waxaad u burburin doontaa. Haddii aad ka tagto, ka dibna waxa uu sii joogi doonaa qalloocan. Markaas, aad wanaag u sameeya. 
In Sheeko kale,
Indeed, naagtii ku abuuray feeraha qalloocan, oo isna ma uu awoodi doono inuu ku sii negaado istiqomah la mid xaalad. Haddii aad leedahay xiiso u leh, oo waxaad ka helaysaan isaga, laakiin waxa uu weli laabin lahaa. Haddii aad isku dayayaan in ay toosi, markaas waxaad u burburin doonaa, jebin waxaa loola jeedaa in aad la furo. 
Ha ninku ka warqaba qof aasaasiga ah iyo dabeecadda dumarka, si ay u caqli ah iyo samir uga jawaabaan, maxaa yeelay taasi waa dabiiciga ah ee haweenka oo dhan. Sidaas darteed, ninku u dulqaadan karin qaladaad iyo iyaga oo aan u baahan tahay inaad shakhsi ahaan u qaadataa. Hasan Basri rahimahullah yiri, "Nin sharaf leh account aad si taxadir ah khalad oo dhan ma noqon doonto." 
Shanaad: xanaaqiisa in buuxdhaafay oo aad u badan galay Jidka ninkeeda si dhakhso ah hoos u thalak. Dhab ahaantii, waxaa jira qayb ka mid ninkeeda uu qof xun, (tusaale ahaan) waxaa mar kasta halis naagtiisa ku furo, haddii ay ku xad wixii waa la neceb yahay, xitaa hadii yar awgood oo keliya.
Sayga waa in ay u adkeysan qas cadhada awoodaan, oo wuxuu damcay inuu aamusiyo. Ha u ogolaan ninkeeda ku hadlaan xakameeyaan, si ay si qasab ah ku qaadan ereyada "thalak". Nabiga sallallaahu 'wa yiri.
Ma aha nin xoog leh oo garaaci kartaa qofka kaa soo horjeeda dagaal, (laakiin) xoog ah waa mid ka mid ah oo dejinaaya karaa kejolak cadhooday, marka uu noqon lahaa cadhooday. 
In sheeko, marnaba nin Nabiga sallallaahu yimid 'wa oo wuxuu ku yidhi, "talo i sii," Nabiga sallallaahu' wa yiri, "ha u cadhoon," mar uu ka codsaday iyo Nabiga la wali lagu hayaa soo noqnoqda, "ha u cadhoon . " 
Tip Rasululullah sallallaahu 'wa In careysan Sii.
• Isku dayga inaad xasilloonaataan markii socday waalan, Nabiga sallallaahu 'wa yiri.
Haddii aad u xanaaqay, markaa is daji. Haddii aad u xanaaqay, markaa is daji. 
• Qaado magangal Eebe ka Shaytan la xarrimay.
Sulaiman Ibn Sard Radi 'anhu Qisadii, mar laba qof ayaa la kagama mid kale ka soo horjeeda ay joogaan Nabiga. Dhanka kale, waxaan fadhiya kooxdiisa. Mid ka mid ah caayay kale la cadhooday, ilaa wejiga cas. Markaas Nabiga sallallaahu 'wa yiri.
Waan ogahay xukun, haddii hadlay oo isaga (ninkii blushes, ed.) By, de markaasaa cadhada baabi'i doontaa. Ha ku yidhaahdo:. Minasysyaithannirrajim Audzubillahi (waxaan magan gal Eebe shaydaan la xarrimay) 
• Haddii aad xanaaqsan tahay, isku day in aad ku fadhiistaan. Haddii ay weli cadhooday, markaas been ha. Nabiga sallallaahu 'wa yiri.
Haddii cid idinka mid ah cadhooday oo waxaa taagan, ka dibna ha fadhiisan. Haddii weli ma Xasishay cadho, markaas been  ha.
• Wudoo, maxaa yeelay maydka dajiyaan kartaa cadho. Nabiga sallallaahu 'wa yiri.
Indeed, cadho ka timaada shaydaan. Markaasaa Shayddaan wuxuu abuurtey naar. Dhab ahaan, dabka lagu demin karaa biyo. Haddii cid idinka mid ah cadhooday, ka dibna berwudhulah. 
• bax guriga si looga fogaado muran.
In this ee abid ka dhaca si Ali, sida Qisadii Bukhaari iyo Muslim ka Sahl Ibn Sacad, uu uga sheekeeyey, Nabiga Fatimah ugu baxay gurigii, laakiinse ma uu heli Ali. Markaasuu ku yidhi, Fatima, "Xaggee waa ina adeerkiis aad (Ali)?" Ayuu ku jawaabay Fatima, "Waxaan ku dooday in ka dhigaysa igu cadhooday, ka dibna uu ka yimid iyo ma hurdo gaaban ee gurigayga." Rasuul The sallallaahu 'wa ku yidhi qof, "raadso halkaas oo uu yahay! "Markaasaa dadkii u yimid, oo ku yidhi," Rasuulkii Eebe, oo uu hurday ee masaajidka, "Nabiga u yimid isaga ku jira xaalad ah been, korkiina iwada dhacay garbihiisa iyo boodh badan, ka dibna Nabiga ku qoysay oo ciidda ka oo waxaad ku tidhaahdaa," Kac, Rabbiyow, Abu Turaab toosa, O Abu Turaab! " 
Nin iyo naag isku dayayaan in ay ma ha Labada Marjiyo saaxiibkeed, iskaba daa oo labadoodaba waxaa ka fahmeen dabiiciga ah ee kasta. Xaaladdan oo kale, naagtii isku daydaa in ay ka fogaadaan in ay uga dareen ninkeeda wax, oo ugu dambeyntii hoos thalak.
Lixaad: dhaqanto inta badan ka dhigaysa naag ninkeedii xun dalbaday khul'a (weydiiyay furiin by laabtay yarad ee ninkeeda la siiyo). Qaar badan oo ninkeeda qaba a camal xun, oo qudhmay sooscda, had iyo jeer ku dhaaran, inkaar ama mar walba garaacid xaaskiisa.
Ha ninku Dhawrsada Eebe ee naagtiisa associate ee. Waa in uu mahdiya Eebe kii isaga naag. Haweenaydii dejinaaya karaa jahwarereerka iyo samaynta syahwatnya iffah (dayactirka xurmada ee is), gaar ahaan haddii naagtii ayaa dhashay carruur ku helo iyada. Kanu miyaanu ahayn waa in ay sameeyaan waxa ay mahad Allaah? The Nabiga sallallaahu 'wa intestate.
Miyaad ha Haweenka associate.
In xadiis ku xusan:
Xusuusnow, waxaad ku wanaagsan naagood associate samayn. Indeed, inay yihiin 'awanin  (maxaabiis ahaan) aad dhinac. 
Nabiga wuxuu yiri, "Ma waxaad shaqa joojin ma samayn naagihiinna," markaas Umar u hibayso yimid oo ku yidhi, "Zu'irna  Nisa ah (naagood ayaa dhicin inay ka soo hor jeedaan ninku)," Nabiga ninku ogol yahay in ay ku garaacday xaaskiisa. Ka dib markii in haweenka u yimid gurigii Nabiga sallallaahu 'wa daaweynta ka cabanayay nimankooda, Nabiga yiri, "Wax badan ayaa ka mid ah haweenka ku soo noqdo gurigii qoyska Muhammad dacwayn ay daaweynta nimankooda. Indeed, ninku yaa sameeyey (garaacay naagtii) ma aha waalidka ugu fiican ee aad ka mid ah. "
Waxa uu sidoo kale sheegay.
Ha mid kasta oo idinka mid ah oo aan xaaskiisa u duqeeyey sida dhufasho addoon ah, dabadeedna wuu ka soo fara-dhamaadka maalintii. 
In Sheeko kale.
Maxaad cid idinka mid ah lahayd xaaskiisa u duqeeyey sida hit addoon ah, markaas iyada fuck dhamaadka maalintii? 
Toddobaad: Waxa uu doonayay inuu koontaroolo hantida xaaskiisa, ama naagtiisa ku qasbi si ay isaga u siiyaan maalka uu lahaa. Kiiska Tani sambolagen naago badan oo haysta shaqooyin. Sida caadiga ah waxaa dhaawici doonta xidhiidhka ka dhexeeya labada, oo aan dhamaadka yar ee furiinka.
Ma doonaysaa inaad iyaga (Haweenka) qabtaan (in la guursan) si aad keeni kartaa qaar ka mid ah khasnadaha in ay idin siinayaa, haddii aanay samayn dhabta ah shar ku sameeyaan. [An Nisa: 19].
Haddii ay raalli ku ah siiyaan xoolahooda inaad, ka dibna cuno oo ganaax ah. [An Nisa: 4].
Xalaal ma aha, waayo, ninku wuxuu qaataa hantida naagtii, marka laga reebo isagoo rabitaanka ama haddii naagood samayn nuzus. Markii nin guursada qof dumar ah oo loo nicmeeyay anagu, haddii doonayay khasnado khaas ah oo xaaskiisa, markaas ayaa weyddiiyey, u sujuuda-jilicsan. Habkani waa wax ku ool u ah isaga si aad u hesho sida uu u doonayo. Si kale oo loo ogol yahay in isaga, by shuruud, in naag waa inay iyada ku caawin adigoo siinaya qayb ka mid ah howlfulinta mushaharkiisa. Oo kanu waa wanaagsan, gaar ahaan miisaaminta xaaskiisa, hoos u dhigi doontaa ah fiiro gaar ah wax yar iyo waajibaadka dhinaca ninkeeda. Sidaas darteed ma u diidi karo, sida uu cadeeyay nabiga sallallaahu 'wa.
Muslimiinta waxaa looga baahan yahay in la ilaaliyo balamaha (heshiiska) in ay sameeyaan, haddii aan heshiis ka reebban kosher ama qiil sharci darro ah. 
Sidee badan oo qoysaska ku dhicin ha marka laga reebo marka xaaskiisa siinayaa ninkeeda waxa aad filan. Haweenaydii ha garan, si ay u ilaaliyaan sii socodka ah ee reerka iyo faa'iido u ah caruurta si aanay la dayacay. Eebe wuxuu yidhi, والصلح خير (Dhab ahaantii, waxaa dhaanta inay nabadda ka). Ficilka ee haweenka la siiyo Xoolahooda inay ninku waa isku day ah in nabadda. Waxaan rajeyneynaa in Ilaah siin Ajir ugu fiican. Ayaa sheegay in Eebe.
Ruuxii waa dambi dhaafe iyo dib u heshiisiinta fal, Haddaba abaalgudkaygu Abaalkooda ay Eebe agtiisa ah. [Ash-Shura: 40]
Sideedaad: ninkeeda wax dareen ah inay naag u noqoto.
Nimankooda badan ma siin dareenka ku filan oo ay jecelyihiin in ay bannaanka seexdaan halkii ururinta iyo xidhiidhka la joogayaa naagtiisa. Waxaa intaa dheer, mararka qaarkood dibadda ku mashquul arimo yar yar awgood oo aan waxtar lahayn.
Ninkeeda A ayaa loo baahan yahay si ay u awoodaan in ay bixiyaan waqti ku filan iyo dareenka si ay naagtiisii. Ma xaq joogto ah ka tago xaaskiisa, in kasta oo ku andacoonaya mashquul ku samaynaya falalka kale ee cibaadada, sida soonka sunnah iyo habeenkii salaadda. Miyaanan Nabiga sallallaahu 'wa uu sheegay.
Tuuro waxaad xaq u leedahay (ay ku nastaan), indhahaaga xaq u leedahay (hurdada), iyo naagtaada uu xaq u leeyahay in ka badan aad. 
Marka qof dumar ah oo u yimid in ay Umar Ibn Al Khattab inaad ka cabato, "O Taliyaha Mu'miniinta. Ninkaygu wuxuu mar walba waa habeenkii soon iyo tukasho u ah. Waxaan ahay dhab diidan in ay u soo sheegaan inaad sababtoo ah mar walba qaado cibaadada sunnah1. "Cumar ayaa ku jawaabay," Sidee cajiib ah ninkeeda, "laakiin ay weli erayada uu soo noqnoqda, oo Umar ku jawaabay jawaab isku mid ah. Ugu dambeyntii, Ka'ab Al Asadi yiri, "O Taliyaha Mu'miniinta. Naagtan waxay dhab ah oo Cambaareysay habdhaqanka ninkeeda oo aan daryeeli isaga ku saabsan dambe, "markaas Cumar ayaa sheegay," Sida aad ka fahmi naagtan, waxaan idin ka tago arrinkan maqlo. "Ugu dambayntii Ka'ab wac ninkeeda. Marka (ninkeeda) u yimid, Ka'b wuxuu isagii ku yidhi, "Your xaaskiisa si aad dacwad magdhaw ku raadisid si Taliyaha Mu'miniinta." Waxa uu ka codsaday, "Waayo, waa maxay? Ma sababtoo ah waxaan siinnay, ma cunin ama cabin? "Ka'b ku jawaabay," Maya "
Ugu dambeyntii waxay tidhi:
O xaakinka kuwa caqliga leh,
Masaajidka ayaa ninkayga ka degaysid sariirta la dayacay
Caabudina waxaan ka dhigayaa ma u baahan sariirta
Adililah kiiskan, O Ka'ab oo samayn aad diido
Maalin iyo habeenba marnaba seexdo
Marka ay dhacdo in associate dumar ah, anigu ma waxaan isaga u ammaanayaa
Markaasaa ninkeedii ku jawaabay:
Waxaan Zuhud aan sariirta iyo qolalka tago
Maxaa yeelay, waxaan hayaa ayaan mashquul iyo wareersan waxa ugu dhaadhacay
Oo kuwaasu Surat an-Nahl oo dheer toddobada warqado
Oo kitaabka Eebe iga dhigay cabsi iyo walwalsan
Marka tani maqalka, Ka'b yiri:
Waxa uu xaq u leeyahay idinka, nin yahow
A kootada afar maalmood oo loogu talagalay dadka aan wax kasayn
Berikah xaq in, iyo ka tago iin lahayn waa in aad ku 
Ninth: awgood iyadoo ereyada "ka thalak".
Nimankooda Qaar ka mid ah, inta badan erayada "thalak" si ay naagtiisii ​​u muuqataa si Iftiin. Mararka qaarkood si kaftan ah tacliiq furtaan bushimaheeda. In kastoo Nabiga sallallaahu 'wa yiri.
Saddex nooc oo ka mid ah xaaladaha sii wadi doontaa in ay dhacaan, inkastoo hadlay qasadeen ama jees, kuwaas oo:. Guurka, furiinka, iyo ruju "
Si habboon, ninkeeda ilaaliyo uu carrabkiisa. Ha dhayalsan thalak ah ereyada, kuwaas oo aan badheedh u wiiqi laga yaabaa in dhismaha guriga, ilaa ay keeni karto qoomamo dheer, ka dib markii bariiska galay Boorash.
Kii tobnaadna: Ila '(ninkeeda Gutay) in aan la faragelin, iyada oo leh weligiis, ama in ka badan afar bilood.
Sidaas darteed tani waa nooc ka mid ah ninkaaga axmaqnimo inay naag u noqoto. Xalada tan, naagtii uu xaq u leeyahay in ay soo gudbiyaan furiin kadib markii uu dhacayo afar bilood ah. Maxaa yeelay Eebe Subhanahu wa imtithaal.
Wixii nimankooda oo aan ku dhaartay in faragelin la joogayaa naagtiisa, markaas naagta waxay sugayeen mudo afar bilood ah. Hadii uu yimaado dib mustaqbalka si ay naagtiisii, Eebana waa dambi dhaafe Naxariista. Haddii uu doonayo in uu furo, Eebana waa Maqle og. [Al-Baqarah: 226-227].
Markaas ninkeeda waa in aan menzhalimi xuquuqda naagtii. Nabiga sallallaahu 'wa yiri.
Ha cabsanina sameeyo cadaalad daro. Indeed, axmaqnimo oo mugdi ah Maalinta Qiyaame. 
Haddii muddo afar bilood ah uu dhici doonaa, waa in uu ruju 'si ay naagtiisii, sida Eebe talinayaa in Kalimadiisii: Hadii uu yimaado dib mustaqbalka si ay naagtiisii, Eebana waa dambi dhaafe Naxariista (Al-Baqarah: 226). Haddii aan ruju ', markaa taasi waa waajibay furiinka xaaskiisa, haddii naagtii u dalbanaya. Si kastaba ha ahaatee, haddii ay naagtu bukaanka (aadan codsan furitaanka, in kasta oo ay ahayd in ka badan afar bilood), aawadood oo ah caruurta ama waxyaabo kale, ka dibna waxa uu caadi inta uu yahay, isagoo aaminsan in laga ilaaliyo falal aan sharci ahayn. U qiimo ayay (naagtii) ay heli doonaan abaalmarin labalaab abaal Ilaah ka yimid, iyadoo rajada ah in maalin maalmaha ka mid ninkeeda helay tilmaamaha Ilaah ka yimid. Ayaa sheegay in Eebe.
Ruuxii u hibeeyeen ilaa ay Eebe, ayaa la samayn doonaa si fudud isaga arrimaha oo dhan. [Ath Thalaq: 4].
Kii kow iyo tobnaadna: Dareen faraxsanayn sababta oo ah xaaskiisa u dhashay gabadh. Sababtoo ah Jaahil ah, qayb ahaan ninkeeda ku hanjabay in ay naagtiisa ku furo, haddii waxa uu helo gabadh yar.
Dhab ahaantii waajib Aamin buu u ahaa ee xukunka Eebe iyo takdirNya. Ilmaha Female ama lab ku dhashay doonistiisa oo keliya. Sida nin, ma dooran karaa. Ayaa sheegay in Eebe.
Eebahaana oo wax ka farxiya iyo dooran abuuraa, ma jirto xuquuqda aadanaha si ay u doortaan. [Al Qhasas: 68].
Wuxuu siiyaa cidduu doono cid kasta oo gabar ilmaha, oo ku siin cid kasta oo cidduu doono wiil, waxa uu sidoo kale ka dhigaysa qof cidduu doono madhalays. [Ash-Shura: 49-50].
Kii laba iyo tobnaadna: muuqata dareenka aan jeclayn naagtiisa, sida had iyo jeer, iyada oo la is barbardhigo dumarka kale ka fiican tahay naagtiisii ​​diinta, anshaxa, qurux, aqoonta, sirdoonka iyo wixii la mid ah. Ugu dambeyntii, ninkeeda oo aan syar'i sababta ka fog xaaskiisa, sida: xaaskiisa meyeleweng ama ninkaaga soo horjeeda.
Sayga waa in bukaan-socodka si uu nasiib si aad u hesho ballan.
Sudhaa soo baxay iyagii si fiican. Eexda si aad wax neceb, laakiin Ilaah wuxuu sameeyey dhexdiisa Khayr Badan. [An Nisa: 19].
In fasiraadda aayaddan, Ibn Abbas ayaa sheegay, "Sayga sujuuda-tartiib ah si ay naagtiisii, Ilaah siiyey hadiyadda ah ee carruurta ay wanaagsan yihiin."
Ibn Kathir waxay yidhaahdeen, "Waxaa laga yaabaa in aad dulqaad oo aan furtaan aad jeclayn, waxaan idin keeni doonaa farxad leh Adduun iyo Aakhiraba."
Imam Asy Syaukani yiri, "Waxaa laga yaabaa in aad dabeecad neceb xagga xaaskiisa, waxaana bedeli doona Ilaah la aragti ah ee jacaylka ku soo dayn doonaa wanaag badan, xidhiidhka ku dhow ama arzuqo ee carruurta. Nabiga sallallaahu 'wa yiri:
(Ha qof neceb saaxiibkeed. Haddii uu neceb yahay mid ka mid ah iyada dabeecad, sida xaqiiqada ah in wax walba oo kale ay noqon doontaa inuu diyaar). "
Waxaa la Qisadii ka Umar Radi 'anhu, ayuu yiri, "qoysas aad u yar ayaa waxaa la dhisay on jacaylka. Si kastaba ha ahaatee, dadka ugu badan ee la wadaajinaysaan (guursaday) lamaanahaaga ku salaysan diinta Islaamka, xirmaan nasab ama in la sameeyo hay'ad samafal. "
Ibn Arabi ayaa sheegay in la sanadnya oo wuxuu ku yidhi, "Waxaa jira aqoonyahan sheikh yaqaan ah oo uu leeyahay uruursanayey ah, lagu magacaabo Abu Muhammad Ibn Abi Zaid . Xaaskiisa dhaqmo foosha xun, ha gutaan waajibaadkooda sida oo naagahaaga, iyo mar kasta iyada uu dhaawac soo carrabkayga. Dad badan ayaa la yaabay oo cambaareeyey habdhaqanka ee camal dhinaca xaaskiisa. Markii la weydiiyay oo ku saabsan habdhaqanka ee camal dhinaca xaaskiisa, Abu Muhammad mar walba, "waxaan ku siiyey Ilaah kala duwan oo ka fadilnay, sida: caafimaadka, sayniska iyo addoommo lahaa. Waxaa laga yaabaa in aan terhdapku xaaskiisa dabeecad foosha xun uu sababay cadaabka Eebe ii, dembiyadaydii. Waxaan ka cabsi qabaa, haddii uu furay imtixaanka ka daran yihiin xaaskiisa dabeecad imtixaanka fool xun iga hoos ugu dhaadhacaa. "
Si habboon, tani waa cashir lama ilaawaan ah u nimankooda. Wax macno ah ma, hadii uu doonayo inuu guursado naag kale ee intaa dheer. Ayaa sheegay in Eebe.
Guursataan Haween oo ay wanaagsan yihiin, laba, saddex ama afar. [An Nisa: 3].
Kii saddex iyo tobnaadna: janjeera ayaa ninkeeda si ay naagtiisii ​​u-haddii mid ka mid ah uu leeyahay in ka badan hal sabab ka cabsi dembiga; sidaa darteedna waxaa lagu qasbay in ay furtaan naagtii kaasoo yar ka doorteen.
Xaaladahan, xaaskiisa waa in la furay heshiisiiyo iyada iyo ninkeeda, sida ereyga Ilaah.
Haddii naag uu ahaa cabsan furay by ninkeeda ama hayaa, markaas wax dhib ah malaha haddii ay fuliyaan sida sulhu (heshiis), oo heshiisiiyo fiican. [An Nisa: 128].
In fasiraadda aayaddan, "Aisha ayaa sheegay," ninkeeda A arkay ayna duleella ku noqdaa xagga naagta ma jecla, sida: da'da kuwaas oo waalidiinta iyo sababo kale. Sidaas, inuu doonayo inuu furo, laakiin xaaskiisa ninkeeda ka baryeen inuusan isku furtaan, oo diyaar u ah inay aqbasho wax daaweynta ka dhanka ah ninkeeda. Sidaas darteed taasi waa xal in ay ka fogaadaan furiin, haddii labada heshiin. "
Ibn Abbas Qisadii, "Sauda cabsan Nabiga furay (maxaa yeelay, wuu ka weyn). Markaasuu wuxuu ku yidhi, 'O Rasuulkii Eebe, ha i furo. Waxaan diyaar u ah si aan u jeedin inay 'Aisha,' Rasuulladii helay soo jeedinta iyo aayadda yimid hoos u ahay:. Macna ma laha hadii ay ka dhigi heshiis, oo waxaa dhaanta inay nabadda "
Rafi 'Ibn Khadij sheeg, in uu qabo afo aan jir. Iyada dabadeedna wuxuu guursaday naag kale oo yaryar. Ugu dambeyntii Rafi 'u janjeedhaa inaad naagtii dhallinyarada. Maxaa yeelay, daaweynta Rafi ', ​​markaas waalidka xaaskiisa ay ka gadoodeen. Markaas Rafi 'hoos ka mid thalak. Marka iddahnya wuxuu ku dhamaan doonaa, Rafi 'wuxuu isagii ku yidhi, "Haddii aad rabto, waxaan ruju doonaa idinka; in, aad diyaar u yihiin (in) aad perlakuanku. Haddii aan, (markaas) waan sii dayn doonaa ilaa iddahmu dhameystirtay, oo aan ruju idinka, "naagtii ayaa ku jawaabay," Ruju'lah, waxaan isku dayi doonaa in ay sugaan aad dabeecad. Ka dib markii Rafi ruju ', mar kale ayuu uga digay daaweynta Rafi' isaga, markaas Rafi 'go'aansadeen in ay furriin. Rafi "ayuu yiri," Taasi waxa sulhu sida Eebe ayaa shaaca ka qaaday in Kalimadiisii:. Haddii naag ka baqay furay by ninkeeda ama hayaa, markaas wax dhib ah malaha haddii ay fuliyaan sida sulhu (heshiis), oo heshiisiiyo fiican "
Si cad u fahmo sulhu ujeedada aayaddan, naagtii ayaa diyaar u ah in ay aqbalaan wax kasta oo la siiyo si ay ninkeeda, inkastoo si loo yareeyo qaar ka mid ah xuquuqdooda, sida waajibka ah oo ay u hoydaan garoonka ninkeeda ama ku nool. Tani waa si looga fogaado in furiin, oo iyana waxay weli u dhaxday. Maxaa yeelay, waxaa u roon in isaga, waayo, intii aan noolaan lahaa oo aan ninkeeda. Gaar ahaan haddii ay reer ninkeeda, atupun uu jir iyo ka baqay halista ah ee furitaanka ahaa. Xusuusta erayadii Ilaah, Oo waxaa dhaanta inay nabadda ka shaqeeya. [An Nisa: 128].
Kii afar iyo tobnaadna: dheeraaday oo cudurka in dhibayso ninkeeda. Mararka qaarkood waxa sabab u ah naagtii dalbadeen furriin.
Haddii keliya naag u qaadi lahaa daryeelka ee bukaan-socodka iyo sii filaysaa jawaab ka Ilaah, waxaa u roon in isaga, sida ereyga Ilaah.
Indeed, kuwa samra waa loo abaalgudi doonaa koobi karayn. [Az-Zumar: 10]
Si kastaba ha ahaatee, haddii uu ka cabsaday dhexdeeda Godoo kale galay falal sharci darro ah oo ay dooni Qallooc, sababa ninkeeda ma sii shaqayn karo baahida noolaha, (markaas) in xaalad sidaan oo kale ah, sababta ma inuu dalban diin iyo furay si ay u ilaaliyaan xurmada qudhiisu ka mid ah; Xaaladdan oo kale waxay ku adkaysatay, waa wax waa khasab.
Kii shan iyo tobnaadna: Siyaabaha ninkeeda ka shakiyaan inay naag u noqoto, ay sabab u tahay saameynta ay Ruuxna, Shaydaanku. Waa in uu ka magan gal Eebe shaydaan la xarrimay, oo aan berperasangka xun. Ayaa sheegay in Eebe.
Kuwa xaqa rumeeyow, ka fogaato nacayb, nacayb dhabta ah waa dembi ah. [Al Hujurat: 12].
Sayga waa in ay ogaadaan, in ay dhacdo Shaydaan ugu dooneen kala qaybsan dhexeeya labada nin iyo naag. In xadiis, ayaa sheegay in Nabiga.
Illeen Shaydaanku saaray boqortooyada biyaha ku dul, ka dibna daryeelka uu ka qaatay ciidamada. Xilkaasi waxa uu ugu sareeya waa shaydaan fitnahnya weyn in ay aadanuhu. Mid ka mid ah wuxuu Shayddaan ku yidhi, "waxaan sameeyey oo kale iyo sida," Markaasaa Ibliisku wuxuu ku jawaabay, "ma aad samayn," markaasaa Ibliisku mid kale yimid, oo wuxuu yidhi, "Maaha waan ka tegayaa qof aan caayo, ilaa iyo inta aan u suurtagashay in ay kala ayuu la joogayaa naagtiisa, "Ibliisku wuxuu ku dhow fadhiistay, oo wuxuu yidhi," Waxaad tihiin Ummadda u Khayroon ee ciidankii. "
Kii lix Haweenaydii Sayga ka yar tahay awoodda. Socdaalka ee kelyaha guriga hoggaan si ay naagtiisii, oo waa in ninkeeda tanggan. Laakiinse Ilaah leeyahay.
Ninku waa hoggaamiye loogu tala galay dumarka la dheeraadka ah in Ilaah oo la siiyey qaar ka mid ah iyo si ay u noolaadaan sababtoo ah waxa ay ku siin (xaasaska). [An Nisa: 34]
Waxaa gabi ahaanba ku dhici kartaa, sababta oo ah ninkii tabar shakhsi ama beeniyo been ah, in uu ka ahaa sidii nooc ka mid ah caabudeen xaaskiisa. Oo sidaas daraaddeed markii uu miyir qabo oo aad dooneyso inay u soo celiso, iyada oo, waxaa soo baxday, wuuna kari waayay. Sidaas daraaddeed, ugu danbeyn keentay in furiinka.
Tan iyo markii ay is guursadeen, ninkeeda waa in ay ahaadaan si buuxda u ogyahay, in hoggaanka qoyska wuxuu noqon doonaa in tanggannya. Ha u ogolaan jacayl xad dhaaf ah ama kibir naagtii ku guursan kartaa, ugu danbayntii isaga daciif ah ay goobjoog ka ahaayeen isaga, xaaskiisa iyo lihina waxay la Qoomamada aan waxtar lahayn.
Kii toddoba Haweenaydii Sayga guriga yimaado habeenkii ka dib safar dheer oo aan ogeysiis hore. Tani mararka qaar ka dhigay kan u arkaan wax uu nebcaatay, waayo, naagtii ku jira xaalad ah ma u diyaariyaan isaga. Nabiga yiri.
Haddii aad u safrayso waqti dheer, sidaa sameeyaan ma guriga waxaad u timid inaad naagtaada habeenkii. 
Sidaas in xaasaska jir ah oo maerkii qurxiyey timo shanleyn iyo timaha shuunka xiiray. 
Ninkeeda waa guriga ku soo noqon inta lagu jiro maalintii uu guriga yimid ka safraya waqti dheer, iyo in la wargeliyo ka hor ku saabsan uu ka soo laabtay, xaaskiisa si yaab ma leh.
Kii siddeed iyo tobnaadna: Qoysaska waxaa lagu korinayo ku salaysan waraaqo ah, ama xiriiro telefoon oo micnaheedu noqday caan courtship muddada guurka ka hor.
Qoysaska Mahligai kropos dibanggun on aasaaska sidaan oo kale ah, waxaa sida caadiga ah waxay keeni doontaa in burburinta. Llah A sheegay.
Waa dad isku mid ah oo la dhisay aasaas u ah sare ee Taqwa iyo raalli ahaanshihiisa Eebe kuwa la dhiso aasaas u ah in ka badan yaamayska Jahannamo, kaas oo ugu dambeyntii ka dhigaysa dhici Naarta Jhannamo Yaa; Eebana ma aha mid u kaxeeyaa kuwa samayn kezhaliman. [At Tawbah: 109]
Ibn Xusayo rahimahullah yiri, "Runtii fal lagu sameeyo kuwa daacadda ah iyo ka dib Sunnah ah, macnaha in la dul dhisay aasaaskii dhawrsashada ku soo dayn doonaa saabsan janno ah Naciimo. Falalka waxaa dhisay xumaan u dan, faasiqnimo iyo riddada, aasaas oo la dhisay qarkii yaamayska, taas oo ka dhigaysa waxay galeen Jahannamo. Eebana ma hanuuniyo kuwa Daalimiinta. "
Ma habboon tahay in nin kuwaas oo doonaya in ay codsadaan qof dumar ah in ay yimaadaan oo uu mas'uulka, oo wuxuu tegey gurigii albaabka, sida ereyga Ilaah.
Laakiin wuxuu kugula waa taqi ah, oo wuxuu soo geli guryaha albaabka. [Al-Baqarah: 189]
Ibn Xusayo yiri, "From aayaddani waxa laga soo qaadan karaa gunnada, ninkaas waa in la soo gelin arrimaha kala duwan ee wadada ugu fudud, dhow oo waxaa loo dhiibi doonaa Ahaado." 
Haweenka ayaa in aynaan ku dhicin in xidhiidhka darrada ah (shukaansiga) waa khiyaano miidhan; si aanay u cadhaysiin Eebihiis oo ku soo dejin doonaa failure in uu naftiisa.
Sagaal: Marka habka codsiga, ninku ma arkin aroosadda. Mararka qaarkood in uu maanka, suuraynta ninkeeda oo ku saabsan tirada naagtii ku haboon. Si kastaba ha ahaatee, dhamaystirka heshiiska galay room- iyo xoogga uu la yaabay in ay arkaan xaaskiisa oo aan ahayn sida ugu fiican ee dabiiciga ah male. Sida caadiga ah, taas oo ay isaga nafta ka jeedsan lahaayeen ka xaaskiisa.
Sidaa darteed, waa in ninku la filayo Arkay dumar ah musharaxa ugu horeysay in ay dilamarnya. Qoyska uu ka naagtu aanay si ay u xiri, maadaama ay tani waa Rasuulka n taliska noqday mid ka mid ah arrimaha ay tahay sii hurin laga yaabaa in guurka.
Laga soo bilaabo Mughirah Ibn Shu'bah, in uu soo jeediyay in ay qof dumar ah, ka dibna Nabiga wuxuu ku yidhi isagii.
Fiiri isaga, maxaa yeelay waxa ay melangengkan lahayd xiriir. 
Kii labaatanaadna: Marxuum guursaday. Khubarada ku doodaya in goor dambe guursado waxay keeni doontaa in xiriir aan ku faraxsan yahay oo qani sida riyo ah. Sababta, maxaa yeelay labada badan oo dhadhan noocyada kala duwan ee qiimaha ama caadooyinka deegaanka la noocyo kala duwan oo midab. Tani waxay u adag tahay in la qabsato dabeecad akhlaaqdiisa la Wadaage. Ilaa dambeyntii dhibaatooyinka badan oo kac iyada oo sababtu tahay isku dhac laba qof oo kala duwan adag gudanin. Sahamis iyo xaqiiqada ka helay oo la xaqiijiyey khubaro duurka, in xidhiidhka guur ee lamaanaha guurka daahay ugu dhakhsaha badan lagu kala qaybsameen doono iyo dhismayaasha guriga ay dhisay ugu dhakhsaha badan way dumi doonaa.
Sidaa darteed, dhalinyarada waa ka dedejisan xaggiisa si aad u guursato oo aad u dhacaan. Waxaan ku xusuusinayaa xadiis Nabiga sallallaahu 'wa.
Saddex nooc oo dadka loo baahan yahay Ilaah jooga inay isaga caawiyaan; mujaahid u Jidka Eebe, Adoonkana addoon oo raba in ay soo furatay inay noqon madax banaan iyo inay guursato ah 'iffah. 
Xadiiska Tani waxay dhiirigelisaa inaan dhalinyarada, in Ilaah u ballanqaaday inuu isaga caawiyaan oo loo fududeeyo ganacsiga, haddii uu berazzam in ay guursadaan. Sidaas ma jiraan wax muddo dheer sabab kasta isaga, laakiin waxay bilaabeen inay isku dayaan in ay u dhici iyo tala saartay Eebe.
Waxaa lagu yaqaan Ha, in la guursaday da'da hore waxay sahlaysaa ninkeeda pasagan iyo xaaskiisa si ay u awoodaan inay la dhaqmaan oo ay fahmaan nooca kasta. Waxaa intaa dheer, guurka waqti hore waa mid aad wax ku ool ah si ay u ilaaliyaan karaamada dadka, saamayn togan ku saabsan caafimaadka iyo fekerayo maturity qaarkood, sida xaqiiqada ah ayaa la xaqiijiyay. Taasi waa sababta Islam ayaa soo jeedinaya.
Halkii haweenka ayaa sidoo kale ma aha goor danbe in ay is guursadeen. Guur hore waa ka sii taageero farxad guriga, sida kor ku xusan. Haddii uyimid nin sekufu '(oo u dhiganta), ka dibna waxaa qasab ku ah in ay aqbasho isaga oo aan diido, inkastoo sababta waxbarasho iyo wixii la mid ah. Ha ku dhumin fursad ah in u yimaado. Eexda sidaas, mar dambe iman doonaa ninkii sekufu 'ama xitaa aan hal socda la soo jeediyay.
Haddii ay weli doonayo in uu dugsiga, ha sameeyo qabanqaabooyin ka hor si ay ninkeeda, haddii ay noqoto shuruudahaas la nolosha qoyska turunturoodo lahaa. Haddii ay taasi dhacdo, markaa waxaa qasab ku ah in ay kala mudaan isaga kiisaska taasoo keeni karto nabad iyo isu isdaahiriya, by doorashada si ay u guursadaan. Ha waano naagaha guursaday daahay qaado. Maadaama uu sababaha kor ku xusan, ugu danbeyn laga badiyo badan oo fursado iyo abaalmarin.
[Guuriyeen ka edition magazine ee As-Sunnah 07 / Year VII / 1424H / 2003M Published Lajnah Foundation Istiqomah Surakarta, JL ah. Solo - Purwodadi Km. 8 Selokaton Gondangrejo Solo 57 183 Tel. 08121533647, 08157579296]
Posted by needsjobslowongankerja at 4:43 AM